MODA | Article Detail | Crush က ကိုယ့်ကို စိတ်မဝင်စားမှန်း တန်းသိနိုင်တဲ့ Text Message များ
Crush က ကိုယ့်ကို စိတ်မဝင်စားမှန်း တန်းသိနိုင်တဲ့ Text Message များ
2020 ရောက်နေပါပြီ။ ပြောချင်တာကတော့ Relationship တစ်ခုက Text Message တစ်ခုနဲ့ စတင်နိုင်သလို အဆုံးလည်း သတ်နိုင်ပါတယ်။ Social Media က နေ့စဉ်ဘဝကို လွှမ်းမိုးလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာဆိုတာကလည်း အမျိူးမျိုးရှိလာပါတယ်။ အကောင်းဘက်က တစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ Crush နဲ့ အပြင်မှာ ကမောက်ကမနဲ့ စကားပြောစရာမလိုပဲ Virtual World ကနေ ဖြေးဖြေးချင်းစီ ချဉ်းကပ်နိုင်ပါပြီ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစကားပြောရမယ်ဆိုတာကအစ အချိန်ပိုယူနိုင်တာပေါ့။ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကသာ ပြောနေတာ၊ လမ်းကြောင်းတွေခင်းနေတာ ဟိုဘက်က တကယ်စိတ်ဝင်စားလား၊ ပျင်းနေလို့ ပြန် Chat တာလားဆိုတာကို ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူး။
အချိန်မလွန်ခင်မှာ နောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်ဖို့အတွက် သူပို့လာတဲ့ Text ပုံစံကိုကြည့်ပြီး ရှေ့တိုးသင့်၊ မတိုးသင့်ဆိုတာကို စဉ်းစားနိုင်ဖို့ (ကူညီတာပါ) အသုံးဝင်မယ့်အချက်လေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိူး စာတွေတွေ့တာနဲ့ ပြန်ချေ ပလိုက်ပါတော့။ ကိုယ်ဘက်ကပဲ မြောင်းတွေဖောက်နေရတာ မမောဘူးလား။
ကဲယူနဲ့ စာလေးတစ်ကြောင်း၊ နှစ်ကြောင်းတောင်ရိုက်ဖို့ အားမထုတ်ချင်တာ ဘာတွေမျှော်လင့်အုံးမှာလဲ။ ကိုယ်ကသာ ထွေရာလေးပါးလျှောက်ပြောနေတာ သူ့ဆီက လက်မတို့ “k” တို့ ပြီးရင် “Haha” နဲ့ “Lol” တွေပဲပို့လာပြီဆိုတာနဲ့ ထပ်ပြီး အားမထုတ်ပါနဲ့တော့။
စားပြီးပြီလားတို့၊ မိုးရွာနေတယ်တို့ ကိုယ်ကသာ သွားသွားပြောနေတာ။ သူ့ဘက်က ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ စာတစ်စောင်တောင် ရောက်မလာရင်တော့ လုံးဝနိုးပါနော်။ ဒါက သူ့ဘက်က စိတ်မဝင်စားကြောင်းပြတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထက် သူ့မှာ စိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေနိုင်လို့ပါ။
ဆင်ခြေ၊ ဆင်လက်၊ ဆင်နားရွက်
ကိုယ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆီက “ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မလား”တို့ “ကော်ဖီသောက်ရအောင်လေ”တို့ စတဲ့ Asking Out လုပ်တဲ့မေးခွန်းတွေက တကယ့်ကို အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ချေတဲ့သူဖြစ်နေစေအုံး။ “သွားကြမလား”တော့ ပြန်ပြောကြမှာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး..ကိုယ်ကစခေါ်လိုက်တိုင်း “မအားဘူး”၊ “အမေက အပြင်မထွက်ခိုင်းဘူး”၊ “သွားစရာရှိတယ်” တွေဆိုတာတွေက တကယ့်တော့ ကိုယ့်ကို ပါးပါးလေးပြန်ပုတ်ချနေတာပါတဲ့ရှင်။
လုံးဝကိုယ့်အပေါ် စိတ်မဝင်စားကြောင်းသိနိုင်တာက ကိုယ်မေးလိုက်တိုင်းတော့ ဖြေတယ်။ သူ့ဘက်က စကားပြန်မစလာတာပဲ။ “ယူကောတို့” ဘာတို့မလာပဲ။ “အင်း”နဲ့ ပြီးသွားရင်တော့ သူကိုယ်ကို အရေးမစိုက်တာသေချာနေပါပြီ။ ကိုယ်ကပဲ အားထုတ်နေရတာက စိတ်မကောင်းစွာပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကသာ တစ်ဖက်သတ် စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
သူ့ဆီကနေ စာလေးတစ်ကြောင်း တွေ့ရဖို့ အချိန်တော်တော်လေးစောင့်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ လည်ပင်းပဲရှည်သွားလိုက်မယ်။ ဘာမှဆက်ဖြစ်လာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဖုန်းသိပ်မသုံးတဲ့သူ၊ အလုပ်များတဲ့သူဆိုရင်တောင်မှ သူ့ဆီကို Text တွေရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းက အမြဲမအားနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ Text တစ်စောင်ဖတ်ရဖို့ အမြဲစောင့်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ အလိုလိုသိလိုက်တော့။
အသိသာဆုံးကတော့ ကိုယ်ပို့လိုက်တိုင်း Reply မလာပဲ Seen လေးပဲပြတာပါ။ ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်း ဒါမှမဟုတ် တစ်နေရာကို သွားမလားမေးတိုင်း Reaction မလာတဲ့အချိန်တွေပေါ့။ တော်တော်လေးကြာမှ ရောက်လာတဲ့ Text Message ကလည်း “ပို့ထားတာမတွေ့လိုက်လို့”တို့၊ “အိပ်ပျော်သွားတယ်တို့” ဆိုရင်တော့ သေချာပြီအရှုးလုပ်ခံနေရပါပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို မြန်မြန်အဆုံးသတ်သင့်နေပါပြီနော်။
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖျက်သင့်လား?
နှစ်ယောက်သား လမ်းခွဲပြီးလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမှာ အတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရတွေကို သိမ်းထားမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်တောက်လိုက်မှာလား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါ အနည်းနဲ့အများတော့ ထိခိုက်တာမို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေမှာပါ။ သတိရတဲ့အချိန်တိုင်း ပြန်ကြည့်ဖို့ သိမ်းထားမလား။ အပြီးတိုင် မေ့ဖျောက်ပစ်လိုက်မလား။
ကျောင်းတုန်းကတည်းက ကြိုက်လာတဲ့အတွဲဆိုပါစို့။ အနာဂတ်ကို အတူတူ ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတာကို စီစဉ်တိုင်ပင်ထားပြီးသားဆိုပေမယ့် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါတစ်ခုခုကြောင့် ဝေးရတော့မယ်ဆိုမယ်ဆိုရင် အမှတ်တရအဖြစ်ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖျက်ရမယ်ဆိုတာက တော်တော်လေးကို ပြင်းထန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်စေမှာပါ။ ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာကလည်း လူကို လွမ်းဆွတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါမှမဟုတ် အခြားမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်ရတာဆိုရင်တော့ ဒီဓာတ်ပုံတွေကို ဆက်ပြီး သိမ်းထားရတာက အောဂလီဆန်စရာကောင်းမှာပါ။ ဒီလို ကိစ္စတွေက အကြောင်းအရာအမျိူးမျိူးရှိနေနိုင်လို့ သူနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကော ဖျက်သင့်၊ မဖျက်သင့်ဆိုတာကို အဖြေရှာလိုက်ရအောင်နော်။
အရာအားလုံးကို ရပ်တန့်ဖို့ ကိုယ်က ဆုံးဖြတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်း အခြေအနေတွေက အေးဆေးပဲဆိုရင်တော့ ပုံတွေကို ဆက်ပြီး သိမ်းထားတာက ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Social Media မှာ ဒီတိုင်းကြီးထားတာက အဆင်ပြေမလားဆိုတာကိုတော့ နှစ်ခေါက်လောက်ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
သိမ်းထားလို့ရတာမှန်ပေမယ့် Facebook Profile တို့၊ အဝတ်ဗီရိုမှာ ကပ်ထားတာ၊ မှန်တင်ခုံနား၊ စာကြည့်စားပွဲနား ထားတာတွေကိုတော့ ရှောင်သင့်တယ်လို့ Dating အကြံပေး Masini ကပြောထားပါတယ်။
ကိုယ့်ရည်းစားအသစ်က Insecure ဖြစ်တတ်ရင်
ကိုယ်က ရည်းစား အသစ်ရပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ အရင်အချိန်က ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပုံကိုထားတာက သူကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာဖြစ်သလို၊ ကိုယ့်ကိုလည်း မကြည်ရင် မကြည်သလို ရစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေက သူ့အတွက် စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်စေရင် ဖျက်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါ၊ အတိတ်ထက် အနာဂတ်တွေက ပိုအရေးမကြီးဘူးလား။ အဆိုးဆုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပုံတွေဖျက်ရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ သေချာဆွေးနွေးပြီး နားလည်အောင် ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့် Facebook Profile ထဲမှာတော့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပုံထားထားပြီး အကွက်တွေ ရွေ့ချင်ရင်တော့ အရွေ့ခံရတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ကို စိတ်ထဲမှာ သိပ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကို ခုထိစိတ်မပြတ်သေးဘူးလို့ ထင်သွားနိုင်လို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အတည်မဟုတ်သေးဘူး၊ အီစီကလီအနေအထားဆိုရင်တော့ ဒီပုံလေးကပဲ အကူအညီအများကြီးရသွားစေမှာပါ။
လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်က ရှှေ့ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ ပုံတွေကို ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးမှာ ထားချင်နေမှာပါ။ အသည်းကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ ရည်းစားဟောင်းမပြောနဲ့။ သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အရာမှန်သမျှက ကိုယ့်အတွက် ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်နေစေမှာပါ။ ပုံတွေကလည်း အတိတ်ကိုပြန်ပြီး တမ်းတစေနိုင်တာမို့ အသည်းကွဲတာကို ပိုဆိုးစေမှာပါ။ ပုံတွေကို ဖျက်ပစ်တာကို မလိုအပ်ပေမယ့် မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားတာက ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကို သက်သာစေမှာပါ။
အဓိကကတော့ ရှှေ့ဆက်ပြီး ဖြတ်သန်းရမယ့် လမ်းခရီးမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတွေ ထားတာက ခံစားချက်တွေကို ပိုဆိုးစေရင် ဒါမှမဟုတ် ရှေ့ဆက်ဖို့ ခက်ခဲနေရင် ဖျက်ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့တာက အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
ဘယ်သူကိုယ့်ကို ကြိတ်Crush နေမလဲမသိချင်ဘူးလား
Cheating ကြောင့် Break-Up ဖြစ်ပြီးနောက် မိန်းကလေးအများစု လုပ်လေ့ရှိတဲ့အမှားများ
Screenshot ရိုက်တင်မှာလား.. No ပါနော်
အခုခေတ်မှာ Relationship ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် အရမ်း လွယ်ကူလာကြတယ်။ လွယ်လွယ် ကတိတွေ ပေးကြသလို လွယ်လွယ်လည်း ကတိတွေဖျက်လာကြတယ်။ နားလည်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။ သစ္စာလည်း မရှိကြတော့ဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Relationship တစ်ခုပျက်စီးသွားတဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေက ယောင်္ကျားလေးတွေထက် ပိုခံစားရတာတော့ အမှန်ပဲ။ အထူးသဖြင့် တစ်ဖက်လူရဲ့ သစ္စာဖောက်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားရတဲ့ Relationship တွေဆိုရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ၊ မေတ္တာတရားတွေကို အလွဲသုံးစား ပြုလိုက်သလို ခံစားရတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ မိန်းကလေးရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေက စိတ်ဒဏ်ရာတွေ၊ မကျေနပ်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု နဲ့ ဒေါသတွေ လွှမ်းမိုးနေတတ်တယ်။ အဲ့အတွက် ပျက်စဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာတွေကိုပြုလုပ်တတ်ကြတယ်။
တကယ်တော့အဲ့လို အပြုအမူတွေက ကိုယ် Vulneurable ဖြစ်တာကို ပိုပြီးပေါ်လွင်သွားစေပြီး ကိုယ်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုလည်း ပိုပြီး ဖော်ပြရာရောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် လတ်တလော Break-up ဖြစ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ဒီအချက်လေးတွေကို မလုပ်မိဖို့ သတိထားဖို့လိုမယ်နော်။
ဒါကတော့ မိန်းကလေး အယောက်တစ်ရာမှာ ၉၉ ယောက်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အမှားပါ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ သူသစ္စာဖောက်သွားတာကို မယုံနိုင်သေးတာ၊ အမှန်တရားကို လက်မခံနိုင်တာနဲ့ သူပြန်လာမလားဆိုပြီးမသိစိတ်က မျှော်လင့်နေတာမျိုးပါ။ အဲ့ဒီစိတ်တွေကို အကုန်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ သူသင့်ဘဝထဲကနေမရှိတော့ပါဘူး။ အဲ့စိတ်နဲ့လက်ခံလိုက်ရင် သင့်စိတ်တွေတစ်ဝက်လောက်သက်သာသွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အချစ်မရှိလည်း ဘဝကြီးကဆက်ပြီးရှင်သန်လို့ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။
Screenshot ရိုက်တင်ပြီး အရှက်ခွဲတာ
Cheat အလုပ်ခံရလို့ အရမ်းနာကျင်ခံစားနေရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ကျေနပ်ပေးလို့မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆိုတာလည်းနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအဲ့လို Cheat လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြတာပဲလေ။ သူဖောင်းတာကို ကိုယ်ကပြန်ဖောင်းမခံပါနဲ့။ ဖောက်ပြန်တဲ့သူက ဖောက်ပြန်တာသဘာဝပဲ။ အဲ့လိုလူကို ဆက်တွဲနေလို့လည်း သင့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလေ။ အဲ့တော့ အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့ သက်သေ Evidence တွေကို တွေ့လည်း Screenshot တွေရိုက်ပြီး Online ပေါ်မှာမတင်ပါနဲ့။ သင့် အဆင့်အတန်းနဲ့သင်နေပါ။ သင့်လိုလူက သူ့လို ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတဲ့သူနဲ့ ဖက်ပြိုင်ပြီးရန်ဖြစ်နေဖို့ မတန်ပါဘူး။ သင့်အဲ့လိုမတင်လည်း တစ်လောကလုံးက ဘယ်သူမှားလဲ၊ မှန်လဲဆိုတာသိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်း အခုချိန်မှာ Social Media ပေါ်မှာ မတင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အထူးသဖြင့် သင်ခံစားနေရတာတွေ၊ ဝမ်းနည်းနေတာတွေ ကို ပေါ့။ Status မဟုတ်ရင်တောင် မိန်းကလေးအများစုက Feel တဲ့ Quotes လေးတွေ၊ ရုပ်ရှင်ထဲကစာသားတွေ၊ သီချင်းတွေကို တင်လေ့ရှိကြတယ်။ မတင်ပါနဲ့။ အဲ့လိုတွေတင်နေတာက သင်ဘယ်လောက် ထိခိုက်ခံစားနေရလဲဆိုတာကို သူတို့သိသွားရင် သူတို့ိကိုတောင်ပိုပြီး အနိုင်ပေးရာကျသွားဦးမယ်။
အရမ်း Slay ပြနေတာ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝကိုက ရွဲ့တဲ့နေရာမှာအရမ်းတော်တာမို့ Feel တော့မ Feel တော့ဘူး။ ငါနင်မရှိမှ အရမ်းဂေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း တတ်နိုင်ရင်မလုပ်ပါနဲ့။ အရမ်းကြီး Social တွေကျပြတာ၊ တခြားကောင်လေးတွေနဲ့ ရုန်းရုန်းရုန်းရုန်းလုပ်တာ၊ အရမ်းကြီး မိုက်နေပြီဆိုတဲ့ Post မျိုးတွေတင်တာက သင်ရဲ့အဆင်မပြေမှု ဝမ်းနည်းမှုတွေကို အပေါ်ယံတွေနဲ့ ဖုံးထားတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။
သင်ပုံမှန်နေနေကျအတိုင်းပဲနေပါ။ အရမ်းကြီး မျက်စိမနောက်ပြပါနဲ့။
Ex ကို ဆက်ပြီး Stalk နေတာ
ဒီအချက်ကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ကို မချစ်လို့ထားခဲ့တဲ့ Ex ကို ကိုယ်က ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ ဆက်ပြီး Stalk နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူခြံခုန်သွားတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ဘယ်သွားနေတယ်၊ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိလို့လည်း သင့်အတွက်ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူးလေ။ သိတော့လည်း သင်ပဲ စိတ်ညစ်ရမယ်၊ ဒေါသထွက်ရမယ်။ မတန်ပါဘူး။ သူနဲ့ ပတ်သက်သမျှအဆက်အသွယ်တွေအကုန်ဖျက်လိုက်ပါတော့။ Contact တွေ၊ Sms တွေ ကို Delete ပစ်လိုက်ပါ။ Facebook၊ Instagram တွေမှာလည်း Unfollow/Unfriend လုပ်လိုက်ပါ။ Mutual Friend တွေကို သူ့အကြောင်းလိုက်မမေးပါနဲ့တော့။ Contact တွေကို အပြီးအပိုင်ဖျက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ သူ့ကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်မေ့နိုင်သွားမှာပါ။
Editor ကိုယ်တိုင်လည်း မိန်းကလေးမို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ သစ္စာဖောက်ပြီးထားခဲ့တဲ့ Ex ကသင့်ကို အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတယ်လို့ သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ အဲ့အပေါ်မှာလည်း မကျေနပ်တဲ့အတွက် သင့်ခံစားသလို သူလည်း ခံစားစေရမယ်ဆိုတဲ့ နာကျဉ်းမှုမျိုးတော့ အနည်းနဲ့အများရှိတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အမုန်းတရားတွေအားလုံးကို ဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်ပါတော့။ ပင်ပန်းပါတယ်။ သင်ကလဲ့စားမချေရင်တောင် Karma ရဲ့ အတုံ့အလှည့်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲ့ Revange အတွက်စဉ်းစားနေမယ့်အချိန်တွေကို သင့်ရဲ့ ဘဝတိုးတက်အောင်ပဲ ကြိုးစားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Personal Improvement အတွက်ပဲအာရုံစိုက် အလုပ်လုပ်ရင် တစ်ချိန်ကျဒီအရာတွေက ရယ်စရာတွေပဲဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။
တစ်ချိန် တိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်တောင် ကိုယ့်ဘက်က အလှဆုံးပြုံးနိုင်မှာပါ။
#Mistakes Girls Do After A Break Up
ပုံမှန် Relationship ထက် ထူးခြားတဲ့ Friend with Benefits ရဲ့ အားသာချက် ၈ချက်
ကဲ လူငယ်တွေကြားမှာ ပြောပြောနေကြ Friend with Benefits အတိုခေါ် FWB က ကြားရတဲ့အတိုင်းဆို လွယ်ကူနေသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စအတွက် ကိုယ်နဲ့ ခုတင်ပေါ်မှာ အဆင်ပြေမယ့်သူ၊ Respect ထားမယ့်သူ၊ ညှိနှိုင်းရလွယ်ကူမယ့်သူရှာဖို့က တကယ်တော့ ခက်ခဲပါတယ်။ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ တန်ဖိုးထားယုံကြည်ရမယ့်အရာတွေပါတာမို့ ရင့်ကျက်ပြီး တာဝန်အပြည့်ယူတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဆိုတော့ FWB က သုံးတတ်ရင် အများကြီး အကျိူးရှိတာမို့ အောက်ကအချက်လေးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့နော်။
ပုံမှန် သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးထက် ပိုမိုကြာရှည်တည်တံ့တယ်။
အမှန်အကန်တွဲနေတဲ့သူတွေထက် သူတို့က ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီးကြာကြာထိန်းသိမ်းနိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ အသက်နှစ်ဆယ်နဲ့ သုံးဆယ်ကြားက Relationship တွေက အချိန်ခဏတာမျှသာဖြစ်နိုင်ပြီး ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကလည်း အချိန်ခဏအတွင်းမှာ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ကတော့ အချိန်အများကြီးမပေးရ၊ မတွေ့ရထိတိုင်အောင် အချင်းချင်းသဘောကျနေနိုင်ပြီး ဆက်ဆံဖို့အတွက်လည်း အချိန်အများကြီးယူစရာမလိုပါဘူး။ တစ်ယောက်လိုချင်တဲ့အရာကို တစ်ယောက်သေချာသိနေတဲ့အတွက် သုံးနှစ်လောက်မတွေ့ဖြစ်တော့ရင်တောင်မှ ပြန်ချိန်းပြီး ရင်ခုန်စရာဇာတ်လမ်းတွေပြန်စနိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေအတွက် စိတ်ထဲမှာ မထားပဲပြောဆိုဖို့က အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခုတင်ပေါ်က ကိစ္စတွေကို ကိုယ့်လက်တွဲဖော်၊ ပါတနာနဲ့ ပြောရမယ့်အချိန်တွေမှာပေါ့။ တစ်ဖက်လူအတွက် အမြဲလိုက်လျောဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် စိတ်ကဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ကတော့ ဒါတွေ တွေးပူစရာမလိုပါဘူး။ တွေ့ချင်တဲ့အချိန်၊ စိတ်ဆန္ဒရှိနေတဲ့အချိန် ဘယ်အချိန်မဆို တွေ့နိုင်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အထူးတလည်ဆွေးနွေးစရာမလိုပဲ အဓိကအကြောင်းအရာကို သွားနိုင်မှာပါ။
ရည်းစားသေချာထားပြီး တွဲတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ပါတနာဆီသွားပြီး အချိန်ပေးရတာ၊ သွားအိပ်ရတာ၊ ဂရုစိုက်ပေးရတာစတဲ့အချက်တွေကို ပြုလုပ်ရမှာပါ။ ဒါက Romantic ဆန်ပြီး နူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်ပေမယ့် အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ သူ့ဆီသွားချင်ချင်၊ မသွားချင်ချင် အဆင်ပြေတဲ့နေရာကို ချိန်းလိုက်ပြီး အစပျိူးတာတွေမလိုပဲ ကိစ္စဝိစ္စပြီးစေမှာပါ။ ကိစ္စတွေပြီးသွားရင်လည်း ကိုယ့် Schedule အတိုင်း လုပ်စရာရှိတာလုပ်၊ အပိုစကားတွေပြောစရာမလိုပဲ နှုတ်ဆက်နိုင်မှာပါ။
လူတိုင်းအလုပ်များနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဆက်ဆံရေးအတည်အတံ့ထားဖို့ဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုခုကိုရဖို့နဲ့ အဆင်ပြေဖို့ ပေးဆပ်ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ အချို့ကိစ္စတွေအတွက် ကိုယ့်ဘက်က ပေးဆပ်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ “Wrong Time, Wrong Relationship” လိုပုံစံမျိူးတွေမှာပေါ့။ ဒီလိုအရာတွေကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ထိန်းချူပ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီအချိန်တွေမှာ ဒီလိုသူငယ်ချင်းက သိပ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်နဲ့ နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ကျေနပ်စရာအချိန်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။
လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်ရတာက တကယ်တမ်းတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီသူငယ်ချင်းလေးနဲ့ ရှေ့မဆက်ချင်တော့ဘူး၊ လမ်းခွဲလိုက်ရင်တောင်မှ အလွယ်ကူဆုံးလမ်းခွဲခြင်း ဖြစ်နေမှာပါ။ မုန်းတီးတာတွေ၊ ငိုကြွေးတာတွေမရှိပဲ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ပြောင်းသွားလို့ ပြန်ဆက်သွယ်ချင်ရင်လည်း ဆဲလွှတ်မယ့်လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ အားကစား
စလာကတည်းက ဒီကိစ္စအတွက် အပေးအယူအမျှမျှနဲ့ ချီတက်လာခဲ့တာမို့ စိတ်ချရတဲ့ Protective Sex ကိုသာ အသားပေးကြမှာပါ။ အချိန်ခဏအတွက်သာ တွေ့ကြတာမို့ အကာအကွယ်က မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
ပုံမှန် Relationship တွေမှာ သူဘာလုပ်မှန်းမသိ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်မှန်းမသိ၊ သုံးရတာရှုပ်တယ်စတဲ့ ဂျင်းတွေနဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ဆက်ဆံနေကြရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းစနစ်ကို စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
FWB ဆိုတာက ကိုယ်အရင်ကတွေးထားဖူးတဲ့ Relationship ပုံစံတွေနဲ့ ယှဉ်တွေးစရာမလိုတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ လက်ထပ်မှာ မဟုတ်ကြလို့ (Obviously) နှစ်ယောက်လုံးအတွက် စဉ်းစားတွေးပူရတာတွေကို လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဆိုတော့ ဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေထားစရာမလိုပဲ Sex အတွက်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ရမှာပါ။ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ ဖြစ်တည်ခြင်းတွေကို ထိန်းချူပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်သား အပေးအယူမျှမျှနဲ့ ပျော်စရာခရီးကို ဆက်နိုင်မှာပါ။
အပေါ်က ပြောခဲ့သလိုပဲ အမျိူးသမီးတွေက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ိကို တွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါတယ်။ လူမှု့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လူတွေ ဘယ်လို Socialize လုပ်လဲဆိုတာ ဒါတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
FWB ရဲ့အားသာချက်ကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရှက်ကြောက်စရာမလိုပဲ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တာပါ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပေါ့။ ယောကျာၤးလေးကော၊ မိန်းကလေးအတွက်ပါ လက်တွေ့ Experience တွေရမှာဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံသစ်ကို ရှာဖွေနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ သဘောတွေ့စရာဖြစ်မှာပါ။
မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်အမျိုးသား ခြေလှမ်းတွေပျက်ပြီး အသစ်တွေ့သွားမှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘာမဟုတ်တဲ့အပြုအမူလေးကိုကအစ သံသယဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အတည်တကျတည်ဆောက်ထားတဲ့ Relationship ကို ပြိုကွဲသွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့် ခင်ပွန်း၊ ချစ်သူအပေါ်ကို သံသယထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ယုတ္တိမရှိဘဲ သံသယတွေဝင်နေမယ့်အစား သူ့အပြုအမူတွေကို ကြည့်ပြီး သူပြောင်းလဲနေပြီလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဘယ်အရာတွေ ဘယ်လိုအပြုအမူတွေက သူသင့်ကို လိမ်ညာနေပြီး ခြေလှမ်းတွေပျက်နေပြီလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
သူ့အကျီပေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းနီရာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရေမွှေးမဟုတ်တဲ့ တခြားမိန်းကလေးရေမွှေးနံ့ရနေပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို မျက်ခြေမပြတ်သင့်တော့ပါဘူး။ သူ့အနီးအနားမှာ သေချာပေါက် တခြားတစ်ယောက်ရှိနေပြီမို့ ဒီအခြေအနေကို သင်ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုနေပါပြီနော်။
တစ်ခါတစ်ရံမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်ရက်ဆက် အလုပ်ချိန်ကြာရှည်ခြင်း ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ Overtime ဆင်းနေရပြီဆိုရင်တော့ သူ့ခြေလှမ်းတွေပျက်စပြုနေပါပြီ။ အမှန်တကယ်ပဲ အလုပ်များနေတာလား။ တခြားတယောက်နဲ့ တူတူရှိနေတာလားဆိုတာကို သင်စုံစမ်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
သူဝတ်ဆင်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပုံစံပြောင်းလဲလာခြင်း၊ အဝတ်အစားအပြင်အဆင်ပေါ် အရင်ကထက်ပိုပြီး အားစိုက်ထုတ်လာနေပြီဆိုရင်တော့ သင်သတိထားသင့်နေပါပြီ။
သူ့အတွက် Privacy လိုအပ်တယ်လို့ မကြာခဏပြောလာရင်တော့ သေချာနေပါပြီ။ သင့်နောက်ကွယ်မှာ သင်မသိအောင်သူခြေရှု့ပ်နေပြီမို့ ဒီကိစ္စကို သင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုနေပါပြီနော်။
သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုပုံစံ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ရင်…………..။ ပုံမှန် ချစ်တင်းနှောနေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ အသစ်အဆန်းပုံစံမျိုးနဲ့ သူ့ဘက်ကဆက်ဆံလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ သေချာနေပါပြီ။ သင်နဲ့မတိုင်ခင် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ စမ်းသပ်လာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်နဲ့အတူ ချစ်တင်းနှောဖို့အတွက် သူစိတ်မပါတော့ဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာသူ့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ အပြင်မှာသူ့အတွက် အသစ်အဆန်းရှိနေပါပြီ။
သူ့ဖုန်းကို ရုတ်တရက် Lock ပြောင်းလဲလိုက်တာဆိုရင်တော့ သူဟာခြေရှု့ပ်နေပြီဆိုတာ အကြွင်းမဲ့သိလိုက်ပါတော့။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Privacy တော်တော်များများကို ခြေရာခံနိုင်တဲ့ ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို သင်သိမှာ သူစိုးရိမ်နေတာကြောင့် အခုလိုလုပ်လိုက်ခြင်းပါ။
ကဲ ပြောပြပေးထားတဲ့အချက်တွေထဲက ဘယ်နှချက်လောက်က သင့်ခင်ပွန်း၊ သင့်ကောင်လေးရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့အချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
#Sex & Relationship
#Is he cheating?
မိုးရွာချိန်မှာ ချစ်သူနဲ့ ဘယ်လို Date ကြမလဲ။
မိုးအေးအေးလေးမှာ Ro ဆန်ဆန်လေး Date ကြရအောင်နော်။
မိုးရာသီကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့် စုံတွဲလေးတို့တွေ မိုးရွာထဲမှာ ချစ်သူနဲ့ Date ပြီး ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရုံလောက်နဲ့ ကျေနပ်နေကြပြီလား။ မိုးအေးအေးလေးမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး Ro နိုင်လို့ ရနိုင်မယ့် နေရာလေးတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီနေရာလေးတွေမှာ အမှတ်တရလေးတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ချစ်သူမရှိသေးသူတွေလည်း အမြန်ဆုံးတစ်ယောက်လောက်တော့ ရှာလိုက်တော့နော်။
အနုပညာပြခန်း (သို့မဟုတ်) ပြတိုက်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။
ဒီလိုပြကွက်လေးတွေကို ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အနုပညာပြခန်း (သို့မဟုတ်) ပြတိုက်ကို သွားရောက်ခြင်းဟာ သင်တို့ကို စုံတွဲအတွက် Romantic Date လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အပြင်မှာ မိုးရွာနေတဲ့အချိန်တွေအတွက် ပြခန်းမှာရှိတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကိုခံစားရင်း အတူတူကုန်ဆုံးခြင်းက သင်တို့အတွက်အမှတ်တရ Date လေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်စေမှာပါ။ ပြတိုက်ကို လည်ပတ်ခြင်းက ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ရင်ထဲကအနုပညာခံစားချက်တွေကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မိုးရွာတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ Bowling ကစားခြင်းနဲ့ အချိန်ကုန်ခြင်းက သင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက် အမှတ်တရလေးတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Bowling ကစားခြင်းဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာတော့ ပျင်းစရာကောင်းပြီး ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူနဲ့ တူတူကစားခြင်းက သင့်အတွက် ပျင်းစရာအချိန်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။ နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့ သင်တို့ရဲ့ မိုးရွာတဲ့ နေ့ရက်တွေအတွက် Date တွေမှာ Bowling ကစားခြင်းဟာ မရှိမဖြစ်ပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီးအာမခံပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Indoor Picnic ထွက်ပါ။
နေရာလေးတွေကို စုံစမ်းထားပြီး Day Trip တစ်ခုစီစဉ်ကြည့်ပါ။ Day Trip စီစဉ်တဲ့အခါမှာလည်း Indoor Picnic ပုံစံမျိုး ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားနိုင်ပြီး တစ်နေကုန်နေလို့ရနိုင်မယ့် နေရာမျိုးတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ မိုးအေးအေးလေးမှာ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းရှိပြီး အတူတူချက်ပြုတ်စားသောက်ကြမယ့် Romantic Date လေးဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်အတွက် အမြဲမှတ်မိနေစေမယ့် အမှတ်တရတွေကို ပေးနိုင်မှာပါ။
ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း Karaoke သွားဖို့အတွက် သတ္တိတော့ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ အသံကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုးကို သူတစ်ဦးတည်းသာ ပရိသတ်အနေနဲ့ နားထောင်မယ့်သူရှိတာကြောင့်ပါ။ သို့သော်လည်း သင်နှစ်သက်တဲ့သီချင်းတွေကို သင့်စိတ်ကြိုက်သီဆိုနေခြင်းဟာ သင့်ချစ်သူအတွက်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တူတူ ဟန်ဆောင်ခြင်းကင်းစွာ စိတ်တိုင်းကျ အော်ဟစ်သီဆို ပေါက်ကွဲနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးလည်းရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မိုးရွာတဲ့နေ့အတွက် Date မှာ ရေကူးခြင်းဟာ အနည်းငယ် အူကြောင်ကြောင်နိုင်ပေမယ့်လည်း သင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက်တော့ အမှန်တကယ် Ro နိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ဖော်ပြလေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ရေကူးဖို့အတွက် ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှန်ကန်ဖို့တော့ လိုမယ်နော်။
Indoor Sport တွေကိုသွားကြည့်ပါ။
မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံတွေမှာ တင်းနစ်ကစားခြင်း၊ ဘော်လီဘောကစားခြင်း၊ ဘိလိယက်ထိုးခြင်းစတဲ့ ကစားနည်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး Date ကြည့်ပါ။ သင်တို့ရဲ့ Date အတွက် ပျော်စရာအတိဖြစ်နေမှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်တို့ရဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်လေးပြီးဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ မိုးရေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ပြီး Romantic Date လေးကို အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်။
#Romantic Date in Rainy Day
Relationship တစ်ခုမှာ Sex က ဘယ်လောက်အထိအရေးပါလဲ။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ Sex က အရေးကြီးပါသလား။
လူတိုင်းအဖြေကတော့ တူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်။ တချို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့အတွက် အရေးမကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ သင်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးပတ်သက်မှုကို ဖော်ပြပေးနိုင်မယ့် အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုမှုများကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ Realtionship တွေမှာ Sex ကိစ္စမပါဝင်ဘဲနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ရရှိတတ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Partner နဲ့ ရေရှည်လက်တွဲဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားသူတွေအတွက်ကတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရင်းနှီးမှုအတွက် Sex ကိစ္စကလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ချစ်သူတွေကြားမှာ ရင်းနှီးမှုပိုစေပြီး တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိနိုင်ဖို့အတွက် Living Together ဆိုတဲ့ လူနေမှုတစ်ရပ်ဟာလည်း ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ Relationship တစ်ခုအတွက် မိမိ Partner အကြောင်းကို သိဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်း အများကြီးရနိုင်သလို Sex ပါဝင်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် လေ့လာမှုတွေအရ ယင်းအကြောင်းပြချက်တွေကတော့ သင့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသနိုင်ပြီး သင့်အပေါ်သူထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ မကြာခဏဆက်ဆံခြင်းဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်အကြားရင်းနှီးနွေးထွေးမှုကို ပိုစေသလို စိတ်လုံခြုံမှုကိုလည်း ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ချို့လည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ Self - Confident ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ သီးခြားလုပ်စရာမလိုအောင်ကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အထောက်အကူပြုစေပါတယ်
ကဲ ဒီတော့ သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုပုံစံဟာ သင်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုရင်းနှီးမှုကို ပြသနိုင်မယ့် အချက်တစ်ချက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။
#Is Sex Important inaRelationship?
အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့်တော့ မွေးဖွားခံနီးထိ လိင်ဆက်ဆံလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်………………..
မေမေတို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကို အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ၃ ပိုင်း ခွဲခြားထားတတ်ကြပါတယ်။ ပထမ ၃ လ ၊ ဒုတိယ ၃ လနဲ့ တတိယ ၃လ ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ ဆေးပညာအဆိုအရတော့ ရက်သတ္တပတ်နဲ့ တွက်ချက်တတ်ပါတယ်။ ဒီ အပိုင်း ၃ ပိုင်းကာလမှာ ကိုယ်ဝန်နုတဲ့ သန္ဓေသားစတည်ချိန်ဟာ မေမေတို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးနဲ့ ဂရုစိုက်ရဆုံးကာလတွေလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒီကာလဟာ ကိုယ်ဝန်စရှိချိန်ကာလတွေမို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်းနဲ့ ပျို့အန်ခြင်းတို့ကို အများဆုံးခံစားရတဲ့အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်လည်း သိပ်မရှိနိုင်တာကြောင့် ဒီအချိန်တွေမှာ ဖေဖေတို့ကလည်း မေမေတို့ကို နားလည်ပေးပြီး အရင်ကထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ဒီကာလကို လွန်မြောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ မေမေတို့ဟာ အရင်ကလောက် နေထိုင်မကောင်းခြင်းကို မကြုံကြရတော့ဘဲ မေမေအဖြစ်ကို စတင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေမေတို့ဟာ သန္ဓေသားလေးကို ထိခိုက်မှာကို စိုးရမ်တတ်ကြပါတယ်။ သန္ဓေသားလေးဟာ လုံခြုံတဲ့ သားအိမ်အတွင်းထဲမှာ ရှိနေတာမို့ သန္ဓေသားလေးကို ထိခိုက်မှာကိုတော့ စိုးရိမ်ဖို့မလိုအပ်ပေမယ့် ဖေဖေတို့အနေနဲ့ မေမေတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို မေးဖို့လိုပါတယ်နော်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလဟာ မေမေတို့အတွက် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆန္ဒထက် Baby လေးအတွက်သာ အာရုံရှိတတ်ကြတာမို့ နှစ်ဦးသဘောတူမှသာလျှင် ဆက်ဆံဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်။ တစ်ဖက်မှာလည်း မေမေတို့ရဲ့အတွေးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်မှာ ဖေဖေတို့ အပြင်မှာဖောက်ပြန်မှာလည်း တွေးပူတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာလည်း မေမေတို့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဆက်ဆံဖို့ အကြံပေးပါရစေနော်။ ဖေဖေတို့အနေနဲ့လည်း မေမေတို့အတွက် ညင်သာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းတချို့ကို ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ မေမေတို့ရဲ့ ဗိုက်ကို ဖိမိစေမယ့် အနေအထားမျိုးကတော့ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်တာကြောင့် ဘေးတိုက်အနေအထားနဲ့ ဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မေမေတို့က ကုတင်စွန်းမှာ ပက်လက်အနေအထားနေပြီး ဖေဖေတို့က မတ်တပ်ရပ်အနေအထားမျိုးနဲ့လည်း ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ဆက်ဆံနေချိန်မှာ လိင်စိတ်အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်နိုင်တာကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ဖေဖေတို့ရဲ့ အပေါ်ကနေ ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ဖေဖေတို့အနေနဲ့ ညင်သာပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်နော်။
ချစ်တင်းမနှောခင်မှာ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးက မေမေတို့အတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်နော်။ ချစ်တင်းနှောနေချိန်တွင်း မည်မျှပင်စိတ်အထွဋ်အထိပ်ရောက်ရှိစေကာမူ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ စအိုထဲ ထည့်သွင်းတာကိုရော ရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်နော်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက မေမေတို့အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံဖို့မသင့်တော်သူတွေကတော့ ကလေးပျက်ကျဖူးသူ၊ ကလေးအချင်းရှေ့ရောက်နေသူ၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ အမွှာကိုယ်ဝန်ဖြစ်ခြင်း၊ အဖြူဆင်းခြင်း အစရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်နော်။
#Sex during Pregnancy